Ace3LTE GT-S7275R Version 4.2.2 မှာ မြန်မာဖောင့်အလန်းဆုံးလုပ်မယ် ~ mgkhainghtoo
Ace3LTE GT-S7275R Version 4.2.2 မှာ မြန်မာဖောင့်အလန်းဆုံးလုပ်မယ်
Ace3LTE GT-S7275R Version 4.2.2 မှာ မြန်မာဖောင့်မပါဝင်ပါဘူး ။
အရင်ဆုံးဖုန်းကို Root လုပ်ပါမယ် Vroot ကို ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ပါ ။ သင့်ကွန်ပြူတာမှာ အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင်ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့်လျှက်တိုင်း ကြိုးချိတ်လိုက်ပြီး Vroot ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လိုက်ပါ
အောက်ထောင့်နားက တရုတ်စာနဲ့အစိမ်းရောင်အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
Loding..... လေးခဏဖတ်ပြီးတာနဲ့ အမှန်ခြစ်လေးပြသွားကာ သင့်ဖုန်းမှာရီစတတ်ကြသွားပါမယ် ။
ပါဝါပြန်တတ်လာရင်ကြည့်လိုက်ပါ သင့်ဖုန်း Root ရသွားပါပြီ :)
( ကျနော်ပြထားတဲ့နည်းအတိုင်းပဲ ထည့်ပါ ။ တခြားနည်း Apk တွေဘာတွေထည့်ရင် သင့်ဖုန်းမှာ တခြားဖောင့်ပိုင်းပြသနာရှိသလို စမ်ဆောင်းရဲ့မြန်မာကီးဘုတ်မှာလဲ မြန်မာလိုမပေါ်ပဲ တခြားအက္ခရာများနဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် )
" Samsung မြန်မာစာပါဝင်တဲ့ဖုန်းထဲက Zawgyi2008 ဖောင့်ဖြစ်ပါတယ် DroidSansFallback လို့ အမည်ပြောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် "
ဒေါင်းထားတဲ့ ဖောင့် DroidSansFallback.ttf ဖိုင်ကို Root Explorer ဆော့ဝဲထဲက System >>> font ဆိုတဲ့ဖိုဒါထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ ။
ထည့်ပြီးရင် ဖောင့်အား rw - r - r ပေးပြီး ဖုန်းကိုရီစတတ်ချပေးလိုက်ပါ ပြီးပါပြီ :)
သင့်ဖုန်းမြန်မာဖောင့် ရသွားပါပြီ :)
rw - r - r ပေးနည်းမသိပါက ဒီမှာသွားကြည့်ပါ
" လိုအပ်သည့် Root Explorer Pro ဆော့ဝဲအားဒေါင်းရန် "
Root Explorer Pro V3.1.3 ဆော့ဝဲကို Dev Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
Root Explorer Pro V3.1.3 ဆော့ဝဲကို Zippyshare လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
Root Explorer Pro V3.1.3 ဆော့ဝဲကို Limelinx လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
Root Explorer Pro V3.1.3 ဆော့ဝဲကို FilePup လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
" DroidSansFallback .ttf မြန်မာဖောင့်ဖိုင်အား ဒေါင်းရန် "
DroidSansFallback . ttf ဖိုင်ကို Dev-Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
DroidSansFallback . ttf ဖိုင်ကို Zippyshare လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
DroidSansFallback . ttf ဖိုင်ကို pCloud လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
DroidSansFallback . ttf ဖိုင်ကို FilePup လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
DroidSansFallback . ttf ဖိုင်ကို Limelinx လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
သင့်ဖုန်း မြန်မာဖောင့် မြင်ရသွားပြီဆိုရင် ။ ဖုန်းတစ်ခုလုံး မြန်စာစနစ်ရအောင်ဆက်လုပ်ပါမယ် ။
အရမ်းလွယ်ပါတယ် Root Explorer Pro ဆော့ဝဲထဲကနေဝင်ပြီးတော့ ကျနော်ပုံနှင့်ပြထားသည့်နေရာမှာ စာလေးနှစ်လုံးကို သွားဖြည့်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ :)
ပြီးပြီဆိုရင် စမ်ဆောင်းရဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ကို သင့်ဖုန်းထဲမှာ ပေါ်လာအောင် ဆက်လုပ်ပါမယ်
စမ်ဆောင်းရဲ့မြန်မာကီးဘုတ်ကို ထည့်ရမှာလဲ အရမ်းကိုလွယ်ပါတယ် ။
ကျနော်ပေးထားတဲ့ဖိုင်လေးကို Root Explorer Pro ဆော့ဝဲထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာကို သွားထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ စမ်ဆောင်းရဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ပေါ်လာပါမယ် ။
ကဲ..... သင့်ရဲ့ Ace3LTE GT-S7275R ဖုန်းလေး မြန်မာစာလဲမှန်ပြီး ဘာမှလိုအပ်ချက်မရှိပဲ အလန်းဇယားလေး ဖြစ်သွားပါပြီ :)
နားမလည်တာ မလုပ်တတ်တာများ ရှိပါက ထိုပို့စ်လင့်နှင့်တကွ Facebook - MMF Group မှာ လာရောက်မေးမြန်းနိူင်ပါတယ် :)